विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २९ लाख नाघ्यो, कुन देशमा कति मृत्यु र संक्रमित ? Canada Nepal
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २९ लाख नाघ्यो, कुन देशमा कति मृत्यु र संक्रमित ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वका केही देशमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । केही समयअघि कम कोरोना संक्रमित फेला परेका भारत लगायतका देशमा फेरि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ ।
कोरोनाका कारण विश्वका विभिन्न देशका धेरै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको छन्। विभिन्न देशमा कोरोना खोप पनि लगाउन शुरु गरिए पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १३ करोड ३६ लाख ९१ हजार ८ सय ८२ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २९ लाख १ हजार ७० पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा १० करोड ७८ लाख ८ हजार ९ सय ६६ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ४१ हजार ९७ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड ३१ लाख ९७ हजार ३१पुगेको छ ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ७२ हजार ८ सय ४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड १६ लाख ३७ हजार २ सय ४३ पुगेको छ ।
चैत्र २६, २०७७ बिहिवार ०९:२७:११ बजे : प्रकाशित